Bashaar Al Asad: Hitlarkii Qarniga | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Bashaar Al Asad: Hitlarkii Qarniga
Qalinka: Maxamed M. Yuusuf (Ilkacase)
Taariikhda Calawiyiinta, Caqiidooyinka Faasidka Ah Ee Aaminsan yihiin Iyo Halka Ay Salka Ku Hayso Cadaawaddoodu
In badan oo dadka ka mid ahi maanta waxa ay is waydiinayaan Shakhsiyadda Bashaar Al Asad, Calawiyiinta iyo sida ay u burburinayaan wadanka Suuriya oo ka mid ahaa dalalka ugu muhiimsan dunida Muslimka taariikh ahaan iyo dhul ahaanba iyo sida uu maalin walba raabo raabo ugu laynayo shacabka reer Suuriya Carruur iyo Cirroole isaga oo maanta gaadhay heer uu u adeegsado in uu ku laayo Hub Kiimikal ah (Chemical Weapons) oo sahayday nolosha kumanaan qof oo u badan Caruur iyo dad waayeel ah.
Xaqiiqanimo Xasuuqa Bashaar Al Asad maanta ku hayo shacabka Suuriya ama aha mid ku yimid mucaaradnimada lagala hor yimid balse waa Cadawnimo ka soo maaxanaysa Qalbiga iyo ruuxda Bashaar Al Asad iyo Kooxdiisa Calawiyiinta ah. Qaddiyaddu waa ay ka wayn tahay Bashaar yare oo ahaa dhakhtar indhaha ah oo aabihii kursiga uga dambeeyey. Qaddiyaddu waa sidii Calawiyiintu u qabsan lahayd guud ahaan Bilaadu Shaam (Dhulka Shaam). Calawiyiintu Ma Shiicaa? Ma Muslimbaa, Ma Gaalaa, Halkay ka soo jeedaan? Waa arrimaha aynu qormadan ku eegi doono.
Waa Ayo Calawiyiinta Suuriya?
Calawiyiinta waxa la sheegaa in ay asalkoodii hore ka soo jeedaan Shiicada (Imaamiyada iyo Isnaa Cashariyah) waxaana ka soo baxay Culimo waaweyn oo shiico ah oo uu ka mid yahay Sheekh Xamsa Bin Zuhra Al Xusayni. Waxa la xaqiijiyaa in ay taariikhdooda aasaasnimo ka soo bilaabanto qarnigii saddexaad ee Hijriga, Magacoodii Horena waxa la odhan Jiray Naysariyah. Waxa aasaasay Maxamed Bin Nasiir Al Basiiri Al-Numayri. Caqiido ahaan waxa ay si aad u xeel dheer u weyneeyeen Imaam Cali Ibnu Abaa Daalib (KW) oo ay gaadhsiiyeen heer Ilaahnimo. Iyada oo ay sidaa tahay haddana waxa ay weyneeyaan oo ay aad u jecel yihiin Cabdiraxmaan Bin Muljim oo ah ninkii Dilay Imaam Cali Bin Abii Daalib (Sababta Xagga Dambe Ayaad Ka Ogaan Doontaa). Waxa ay aaminsan yihiin in Cali Bin Abii Daalib Kor degan yahay oo wakhtigan ku sugan yahay Daruur Dusheed oo kaliya la kala saaray Jidhkiisii iyo Ruuxdiisii. Waxa ay ku nool yihiin Suuriya, Turkiga, Lubnaan iyo Qaybo ka mid ah Ciraaq. Waa Calawiyiinta kuwoodii ugu horreeyey taariikh ahaan. Waxa lagu tilmaamaa Qaybta ugu weyn Firqo ahaan shacabka Suuriya marka laga tago Sunniga oo ah Aqlabiyadda dadka dega dalkaasi Suuriya. Calawiyiintu waxa ay Mujtamaca Suuriya ka noqonayaan boqolkiiba saddex iyo toban (13%). Calawiyiinta Suuriya waxa ay soo mareen Marxalado taariikeed oo aad u dhaadheer. Waxa la sheegaa in siyaalo kala duwan ay xukunka dalkaasi u soo maamulayeen taariikh ku siman illaa 1571 taariikhda Miilaadiga. Waxa la sheegaa in aanay muujin shacaa’irta Islaamiga ah sida soonka, salaadda, Masaajidada kama aadaamaan mana muujiyaan Astaamaha Islaamka. Cadaawad ballaadhan oo guun ah ayay u hayaan Muslimiinta Sunniga ah. Sannadihii 1806, 1811, 1852 waxa ay dagaalo culus la galeen Dawladdii Cismaaniyiinta illaa ay soo gaadheen qarnigii 19aad oo xaalku is badalay. Awoodda Calawiyiintu ku leeyihiin Maamulka Suuriya waxa la sheegaa in ay dhowr arrimood sabab u tahay. Waxa ka mid ahaa doorkii ay ku lahaayeen Inqilaabkii dalkaasi ka dhacay sannadkii 1963kii halkaasi oo ay gacanta ku dhigeen Mansabyo culculus oo muhiim ah. Sidoo kale waxa ay ku kaceen Inqilaab kale oo dhacay 1966-kii waxa kale oo ay mar kale Inqilaab ku sameeyeen xukunka Suuriya sannadkii 1973-kii waxaana xukunka dalkaasi gacanta ku dhigay Xaafid Al Asad oo ah aabaha dhalay yarkan maanta shacabka Suuriya xasuuqaya ee Bashaar Al asad. Xaafid Al Asad ayaa la sheegay in markuu noolaa Imaam Muusa Al Sadar oo ah hogaamiyaha Shiicada Lubnaan ka codsaday in uu Fatwo ku soo saaro in Calawiyiintu ka mid yihiin Shiicada. Isaga oo wakhtigaasi doonayay inuu qiil ugu helo xukunka Suuriya maadaama Dastuurka Suuriya dhigayo in madaxweynaha dalkaasi xukunkiisa qabanayaa uu noqdo nin Muslim ah. Waxa jira muran badan oo ka taagan Muslimnimada Calawiyiinta oo culimo badani ku tagsan yihiin in aanay ahayn Muslimiin.
Macluumaad Guud Oo Ku Saabsan Calawiyiinta:
Waxa la sheegaa in qaaradda Yurub ay ku nool yihiin ku dhawaad laba Milyan oo Calawiyiin ahi. Kuwaasi oo intooda badan degan wadamada Jarmalka iyo Faransiiska. Dalka Austria waxa ay sannadkii hore koox diimeed gaar ah u aqoonsatay Calawiyiinta degan wadanka Austria. Guud ahaan Tirada Calawiyiinta waxa lagu qiyaasaa in ay kor u dhaafayaan 80-Milyan oo dof oo intooda badani ku noolyihiin Dalalka Suuriya, Lubnaan, Iiraan iyo Turkiga.
..La Soco cadadka dambe afkaarta iyo waxa ay aaminsan yihiin Calawiyiintu.